अज्ञात अतिप्राचीन समय देखि मानिस आकर्षित। कुनै कुरा कुनै पनि प्रभाव कसरी डरलाग्दो वा थियो, मान्छे अझै पनि नजिक तिनलाई भेट्न चाहन्थे र तरिका यो व्याख्या गर्न खोजे।
अस्पष्ट र आकर्षक
तन्त्रमन्त्रमा विज्ञान - भौतिक वा रसायन को व्यवस्था बेवास्ता गर्दा, को, अज्ञात अलौकिक सम्पूर्ण एक विवरण दिने प्रयास। बस राख्नु, तन्त्रमन्त्रमा अन्य उत्तिकै अबोध्य मार्फत चरम घटनाहरू व्याख्या गर्न प्रतिबद्ध छ। उदाहरणको लागि, कहिलेकाहीं हेर्न किन यो "विज्ञान" को adherents आग्रह गरियो भने भविष्यसूचक सपना, उहाँले तिनीहरूले भौतिक शायद आफ्नो हात फैलाउन र अविश्वसनीय संयोग बताउनुभयो थियो के clairvoyance को उपहार, कि जवाफ थियो। तन्त्रमन्त्रमा विज्ञान धेरै विविध छ, र भविष्यमा होमो Sapiens coherently पनि बोल्न सक्छ जब तिनीहरू केही समय जन्म थिए। को पाठ्यक्रम, त्यसपछि लागि एक मानिस अचम्मको यो सबै थियो, र प्रश्न को सबै भन्दा जवाफ थप वा कम plausible मात्र जादू सकिन्छ छन्। तर आज के भइरहेको छ? कि यो दिन गर्न तन्त्रमन्त्रमा विज्ञान अभ्यास, वा गतिविधिको यो असाधारण क्षेत्र सुरक्षित OBLIVION मा sunk?
पछिल्लो लागि तीव्र दौड
होइन, OBLIVION मा, यो गतिविधि अझै sunk गरेको छैन। किनभने आज विज्ञान त जादुई संस्कार को प्रभावकारिता विश्वास छ कि उन्नत छन् यो, अचम्मको लाग्न सक्छ, curses, वा एउटै भविष्यसूचक सपना मात्र अशिक्षित वा अझै पनि एक खुट्टा छ जो बच्चा गरेको पालने मा खडा सिर्फ एक धेरै अनुभवहीन व्यक्ति सक्छन्। यस्तो व्यक्तिगत गर्न तन्त्रमन्त्रमा विज्ञान ढोका स्वागत गर्न एक प्रकारको छ अर्को विश्व, उहाँले तन्त्रमन्त्रमा मा नै पुस्तकहरू सबै सिकेका जो। जादू को सत्य विश्वास एक हात, आधुनिक मानिस गर्दा लागि गर्न सक्छन् र - उदाहरणका लागि, एउटा चलचित्र हेर्दै वा मामला समान साहित्य पढ्दा। तथापि, प्राविधिक प्रगति तन्त्रमन्त्रमा गर्न सबै बाटो बन्द गरेर धेरै टाढा गएको छ। तर रूपमा यो हुन सक्छ, Solemn संस्कार अब आयोजित छन् हुन। तपाईं विश्वव्यापी कम लिन भने पनि, मानव अन्धविश्वास अझै पनि समाजमा विकास र मानिसहरू माथि देखि रहस्यमय साइन पर्खिरहेका छन्, कुनै पनि दिइएको अवस्थामा के तिनीहरूलाई देखाउनु हो।
सरल कुराहरू एक जटिल दृष्टिकोण
तन्त्रमन्त्रमा विज्ञान हेर्नुहोस्, उत्तर को उनको बिन्दुबाट, निर्देशन र जो यसलाई पर्याप्त फेला पार्न प्रयास छ मुद्दाहरूको दायरा आधारमा धेरै भिन्न छन्। उदाहरणका लागि, occultism को एक धेरै प्रसिद्ध शाखा alchemy छ। को alchemists को मुख्य लक्ष्य, क्लासिक काम गरेर प्रमाणित, को दार्शनिक गरेको ढुङ्गा लागि नुस्खा फेला पार्न छ। तर, यो संयोजन सम्भव छैन, र शिक्षित मान्छे यसको बारेमा थाहा छ। केही पनि परी कथा बस्ने आशा जारी। तन्त्रमन्त्रमा अध्ययन देखि, रूढिवादी विज्ञान सेना र घटना अज्ञात, कहिलेकाहीं उहाँले टाढा विज्ञान नै भनेर माथि राख्छ। को समर्थकहरूको बीचमा यो ज्ञान, मात्र ड्राई वैज्ञानिक तथ्य विश्वास गर्ने atheists र मान्छे भनेर विश्वास गर्नेहरूलाई धेरै - सीमित र सक्षम व्यक्ति मोटे सोच्न। एक शक्तिशाली स्पार्क विद्युत छुट्टी - यो शैतानको को गर्जन, या यो घटना थाहा - तर गरेको ... के खराब छ, बिजुली छ कि सोच्न विचार गरौं? जवाफ, जाहिर छ, आत्म-स्पष्ट छ, तर यो थियोसिस संग समर्थकहरूको र तन्त्रमन्त्रमा को प्रशंसक कहिल्यै सहमत थियो।
विकिपीडिया मा गोप्य ज्ञान
थाहा आज तन्त्रमन्त्रमा विज्ञान धेरै सरल छ के - यो पुस्तक को एक अविश्वसनीय संख्या लिखित र टेलिभिजनमा छ अझै पनि विषयगत कार्यक्रम प्रसारण गरिएको छ। यदि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण संग एक व्यक्ति, यस्तो शो कारण मात्र संदेह मुस्कान, त्यसपछि अन्धविश्वास मान्छे - आफ्नो निधारमा मा घुँडा र पसिना मा कांप। आश्चर्यजनक, अधिक यी मानिसहरू अलौकिक शक्तिहरू अस्तित्व को सत्य विश्वास, अधिक उनि साँच्चै आफ्नो साक्षी हुन मौका छ। तर, यो के तिनीहरूले देखे तिनीहरूले ठीक के सोच्नुहुन्छ छ मतलब छैन। Inflamed चेतना त्यहाँ छैन के देख्न सक्छ, भुइँमा विभ्रम र आतंक रद्द गरिएको छैन। यहाँ र त्यहाँ ती सबै "साक्षी" हो: पहिलो, तिनीहरू साँच्चै विश्वास केहि मा छन्, र त्यसपछि साँच्चै superfluous साथ आउँछन्। तन्त्रमन्त्रमा प्रसारण कि "गोप्य ज्ञान" मात्र विशेष क्षमता मानिसहरूलाई उपलब्ध, तिनीहरूलाई यति सबै समर्पित - निर्वाचित र इमानदार मान्छे को बाँकी - heretics र skeptics।
जब उल्लू उड हुनेछ ...
यस्तो तन्त्रमन्त्रमा, ज्योतिष, spiritualism र Kabbalah "अभ्यास" फैलियो। एक ज्योतिष "अनुसन्धान" हामी स्थानीय weeklies मा पढ्नुहोस्। धनु रोचक छ यस्तो राम्रो आफ्नो वातावरणमा हुन, र वृष - जादू महिला कस्ता फेरि Horoscope लेखिएको। अग्रिम एक व्यक्ति यो पनि विपरीत सेक्स प्यारा कुरियर संग बैठक समायोजन यस वर्गमा अन्तर्गत त्यसैले यो कुनै पनि "सुखद बैठक" हुनेछ भन्ने तथ्यलाई नै कन्फिगर: जहाँ placebo सिद्धान्त यो हो। यो पनि धेरै साधारण र Tarot कार्ड, पाम वा daisies छ। एक हात मा, यो त खराब, कहिलेकाहीं यसले हामीलाई थप आशा दिन्छ किनभने छ। एक व्यक्ति धेरै वर्ष त्यहाँ उहाँले उल्लू पत्र पठाउन थियो जहाँ जादू र तन्त्रमन्त्रमा विज्ञान, को एकेडेमी छ कि तर्क छ जब अलार्म घण्टी आवश्यक छ हरायो। अतिरिक्त आशा भने - यो कुनै पनि मामला मा राम्रो छ, जादू को स्कूल देखि एक पत्र पागलपन को एक सानो smacks छ प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
निराशाको Slough, वा कसरी छिटो Buck बनाउन
मानव गतिविधिको यो क्षेत्र टाढा र व्यापक केही रोचक प्रश्नहरू हालसम्म अध्ययन गरिएका छन्, तर र हावा छन्। तिनीहरूले अक्सर च्यानल चमकता जो "Ren-टिभी" प्रसारण को एक किसिम, जवाफ खोज्दै हुनुहुन्छ। एक यस्तो परियोजना यस च्यानलमा प्रसारण, त्यसैले "Unsolved रहस्यहरुलाई भनिन्छ। किन Bolsheviks तन्त्रमन्त्रमा विज्ञान अध्ययन गर्नुभयो? "प्रश्न नै पहिले नै हास्यास्पद, प्रसारण नै खम्बा छ के वास्तवमा, उल्लेख गर्न सुनिन्छ। आज, त्यसैले राम्रो तथाकथित तन्त्रमन्त्रमा अक्सर प्रयोग अझै पनि जादु विश्वास गर्ने अनुभवहीन मानिसहरू मूर्ख गर्न विज्ञान विकसित भएको छ। दुर्भाग्यपूर्ण सिकार सहन Jewels को gipsies handfuls आफ्नै अपार्टमेन्ट गर्न कुञ्जीहरू दिइएको र ठूलो पैसा तिर्न भाग्य-tellers तिनीहरूलाई fateful निर्णय लिन मद्दत गर्न। निस्सन्देह, सबैलाई उहाँले प्रसन्न के विश्वास गर्ने अधिकार छ। तर यो हामी सबै नदी, तल राख्न माथि वा भविष्यसूचक सपना एउटा साइन लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भनेर अर्थ राख्छ? निस्सन्देह, तपाईं र प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यो लामो अरू केहि रूपमा, नकारात्मक प्रभाव पार्न छैन ...
मान्छे को आभा कसरी हेर्न? विधि र रंग मूल्य
कसरी क्षति र दुष्ट आँखा आफूलाई सुरक्षित र आफूलाई श्राप बाट जोगाउन?
बस कल्पना - त्यहाँ साँच्चै मत्स्यांगना छन् वा?
अलेक्जेन्डर नाम: मूल, अर्थ, विशेषता
मेट्रो "विशिष्ट" - परिवहन एकाइ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहर
आरामदायक घर बनाउन: बुनना crochet कम्बल गर्न सिक्दै
Tver को मास्को राजकूमारद्घारा शासित राज्य सामेल हुँदै कसैले भयो जब र के वर्षमा? मास्को राजकूमारद्घारा शासित राज्य गर्न नोभगोरोड र Tver सामेल हुँदै
फुटबल खेलाडी शेरोनो रोमन
कुर्सियों डिकोउपेज: को सजावट प्रक्रिया
Crile सर्जरी: सङ्केत गर्छ, वर्णन, सम्भव जटिलताहरू। घाँटी मा लसीका नोड्स
दन्त चिकित्सक को Accreditation: लागि प्रक्रिया
रबर नली प्रबलित। लक्षणहरू, मूल्यहरू